Bago Manager ZWL, Author at ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ - Page 20 of 232
Home / Bago Manager ZWL (page 20)
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ MGS Breweries Co., Ltd မှ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ လာရောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်း
မေ ၁၃ (ပဲခူး) =================== မေလ (၁၃)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၃၀)အချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဧည့်ခန်းမသို့ MGS Breweries Co., Ltd မှ ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများ လာရောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းက သဘာဝဘေးနှင့်ကြုံတိုင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများက လာရောက်လှူဒါန်းကြသလို စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကလည်း ဘယ်အချိန်အခါမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ မိမိတို့အစိုးရအဖွဲ့မှလည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း (Volunteer) များကိုလည်း ပြန်လည်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရေး မြို့နယ်အလိုက် ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းဆောာင်ရွက်ရှိကြောင်းနှင့် ယခုလို လာရောက် ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ လာရောက်လှူဒါန်းမှုအပေါ် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် MGS Breweries Co., Ltd. MD ဦးသန့်ဇင်ထွန်းနှင့် ဦးနေမင်းထွန်းတို့က PPE ဝတ်စုံ(၁၅၀)စုံ၊ COVID-19 ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးစာအုပ် (၁၅၀)အုပ်နှင့် ဆန်အိတ်(၅၀)အိတ်တို့အား ထောက်ပံ့လှူဒါန်းရာ၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းက လက်ခံရယူခဲ့ပြီး …
မေ ၁၂ (ပဲခူး) ================ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား (၁၂-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၂:၀၀)နာရီအချိန်ထိ ကဏ္ဍအလိုက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အခြေအနေစာရင်း ပြည်သူများသိနိုင်ပါရန် ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ ပဲခူးခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၆၄)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၇၉၀)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာ(၅)ဦး ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ တောင်ငူခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၅၆)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၁၂၃၉)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာ(၁)ဦး ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ ပြည်ခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၆၆)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၉၈၂)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာ(၂)ဦး ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ သာယာဝတီခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၄၅)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၁၉၇)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာအဖြစ် တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေသူမရှိကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းချုပ်အနေဖြင့် Facility Quarantine (၅၃၁)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၃၂၀၈)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံ၌ …
ပဲခူးမြို့၊ ကလိ(တပ်ကလေး)ကျေးရွာအနီး၌ Myanmar Top Business Group Co., Ltd မှ မုဒိတာရေကန် တူးဖော်လှူဒါန်း
မေ ၁၂ (ပဲခူး) ================= မေလ (၁၂)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀:၃၀) နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ တော်ဝင်ဟံသာခန်းမ၌ ပဲခူးမြို့၊ ကလိ(တပ်ကလေး)ကျေးရွာအနီးတွင် မြန်မာ့ထိပ်တန်းစီးပွားရအဖွဲ့ကုမ္ပဏီလိမိတက်(Myanmar Top Business Group Co., Ltd)မှ မုဒိတာ‌သောက်သုံးရေကန် တူးဖော်လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ ရှေးဦးစွာ မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်းက ပဲခူးမြို့၊ ကလိ(တပ်ကလေး)ကျေးရွာအနီး (၆)ထပ်ဆေးရုံကြီး အနောက်ဘက်တွင် သောက်သုံးရေကန်(မုဒိတာရေကန်) တူးဖော်လှူဒါန်းရခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်း၊ မြန်မာ့ထိပ်တန်းစီးပွားရအဖွဲ့ကုမ္ပဏီလိမိတက်(MYANMAR TOP BUSINESS GROUP Co.,Ltd.)ဥက္ကဌ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် ဒုတိယဥက္ကဌဦးတင်မောင်နိုင််နှင့် တာဝန်ရှိသူများက သောက်သုံးရေကန်(မုဒိတာရေကန်)အား အစိုးရအဖွဲ့သို့‌ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ရာ ဝန်ကြီးချုပ်က ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ ပြန််လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းမှ ပဲခူးမြို့၊ ကလိ(တပ်ကလေး)ကျေးရွာ ပတ်ဝန်းကျင်သည် ရေချိုထွက်ရှိမှုမရှိကြောင်း၊ ကလိချောင်းမှ ရေကိုသာ …
မေလ (၁၁)ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
မေ ၁၁ (ပဲခူး) ================= ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား (၁၁-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၂:၀၀)နာရီအချိန်ထိ ကဏ္ဍအလိုက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အခြေအနေစာရင်း ပြည်သူများသိနိုင်ပါရန် ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ ပဲခူးခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၆၅)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၈၂၂)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာ(၅)ဦး ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ တောင်ငူခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၅၃)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၁၂၁၀)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာ(၁)ဦး ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ ပြည်ခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၆၂)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၉၅၇)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာ(၁)ဦး ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ သာယာဝတီခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၄၅)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၁၉၈)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာအဖြစ် တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေသူမရှိကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းချုပ်အနေဖြင့် Facility Quarantine (၅၂၅)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၃၁၈၇)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံ၌ …
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်
မေ ၁၁ (ပဲခူး) ================== မေလ (၁၁)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀)နာရီအချိန်က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ တော်ဝင်ဟံသာခန်းမ၌ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်သည်။ ရှေးဦးစွာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းက Facility Quarantine စခန်းများနှင့် စာရင်းဇယားများ မှန်ကန်မှုရှိစေရန်၊ Volunteer(စေတနာ့ဝန်ထမ်း) စာရင်းများ ပြုစုတင်ပြရန်၊ ပုဒ်မ(၁၄၄) ထုတ်ပြန်ထားရှိသည့်ကိစ္စအား တရားဥပဒေနှင့်အညီ တိကျစွာ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန်၊ မကြာမီ မိုးရာသီရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်၍ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက် ကြိုတင်စီမံထားရှိရန်နှင့် အထူးသဖြင့် ဆည်/ တမံများ၏ ကြံ့ခိုင်ရေးများ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက အနီးကပ်ကြီးကြပ် စစ်ဆေးရန်တို့အား မှာကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှမျိုးရွှေက ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လာသူများအား နယ်စပ်ဝင်ပေါက်မှတစ်ဆင့် …
မေလ (၁၀)ရက်နေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်
မေ ၁၀ (ပဲခူး) ================= ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား (၁၀-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၂:၀၀)နာရီအချိန်ထိ ကဏ္ဍအလိုက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အခြေအနေစာရင်း ပြည်သူများသိနိုင်ပါရန် ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ ပဲခူးခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၆၆)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၇၈၈)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာ(၅)ဦး ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ တောင်ငူခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၅၂)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၁၁၀၈)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာအဖြစ် တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေသူမရှိကြောင်း၊ ပြည်ခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၅၈)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၉၂၂)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာ(၁)ဦး ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ သာယာဝတီခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၄၄)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၁၉၂)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာအဖြစ် တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေသူမရှိကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး စာရင်းချုပ်အနေဖြင့် Facility Quarantine (၅၂၀)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၃၀၁၀)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံ၌ …
မေ ၉ (ပဲခူး) ================ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား (၉-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၂:၀၀)နာရီအချိန်ထိ ကဏ္ဍအလိုက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အခြေအနေစာရင်း ပြည်သူများသိနိုင်ပါရန် ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ ပဲခူးခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၆၁)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၇၆၆)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာ(၅)ဦး ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ တောင်ငူခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၅၅)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၁၁၁၃)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာအဖြစ် တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေသူမရှိကြောင်း၊ ပြည်ခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၄၂)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၈၀၇)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာ(၁)ဦး ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ သာယာဝတီခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၄၀)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၁၅၀)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာအဖြစ် တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေသူမရှိကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းချုပ်အနေဖြင့် Facility Quarantine (၄၉၈)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၂၈၃၆)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံ၌ သံသယလူနာအဖြစ် …
မေ ၈ (ပဲခူး) ================ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသို့ ပြည်ပနိုင်ငံများမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား (၈-၅-၂၀၂၀)ရက်နေ့၊ (၁၂:၀၀)နာရီအချိန်ထိ ကဏ္ဍအလိုက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အခြေအနေစာရင်း ပြည်သူများသိနိုင်ပါရန် ထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။ ပဲခူးခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၆၅)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၇၇၁)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာ(၅)ဦး ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ တောင်ငူခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၅၄)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၁၀၉၀)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာအဖြစ် တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေသူမရှိကြောင်း၊ ပြည်ခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၁၄၂)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၇၇၃)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာ(၁)ဦး ဆေးကုသမှုခံယူလျက်ရှိကြောင်း၊ သာယာဝတီခရိုင်အတွင်း Facility Quarantine (၄၀)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၁၃၀)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံတွင် သံသယလူနာအဖြစ် တက်ရောက်ဆေးကုသမှုခံယူနေသူမရှိကြောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းချုပ်အနေဖြင့် Facility Quarantine (၅၀၁)ခု၌ ပြည်ပမှပြန်လာသူ မြန်မာနိုင်ငံသား(၂၇၆၄)ဦးရှိပြီး ဆေးရုံ၌ သံသယလူနာအဖြစ် …
Surgical Gown ဝတ်စုံများ KM Healthcare Myanmar Co., Ltd မှ လာရောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်း
မေ ၈ (ပဲခူး) =============== ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ တော်ဝင်ဟံသာခန်းမသို့ မေလ (၈)ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ(၂)နာရီအချိန်က ပဲခူးမြို့၊ ပြည်ပစက်မှုနယ်မြေရှိ KM Healthcare Myanmar Co., Ltd မှ Surgical Gown ဝတ်စုံ(၂၀၀၀)အား လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ရှေးဦးစွာ KM Healthcare Myanmar Co., Ltd , MD. Mr. Lee Dea Chun က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း COVID-19 ကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသခြင်းလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် Surgical Gown ဝတ်စုံများအား မိမိတို့ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် လာရောက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ တစ်ဘက်မှာလည်း နိုင်ငံတော်အတွက် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ထပ်မံ၍လည်း လိုအပ်လာပါက ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွက် ကျန်းမာရေးသုံးပစ္စည်းများ ဆက်လက်ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် KM Healthcare Myanmar …
မေ ၈ (ပေါက်ခေါင်း) ==================== ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ် စည်ပင်သယာရေးအဖွဲ့မှ နွားပွဲစျေးပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် အဖွဲ့ရုံးအသစ် ပြောင်းရွှေ့ခြင်းလုပ်ငန်းများအား (ဒုတိယအကြိမ်) အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းအား ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေး သိရှိနိုင်ပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည်။ အပြည့်အစုံကြည့်ရှုရန်——————————-